गाैशाला बिधुत वितरण केन्द्रद्वारा नि:शुल्क ६५ जनालाई बिधुत मिटर वितरण । - Mahottari Post
गाैशाला बिधुत वितरण केन्द्रद्वारा नि:शुल्क ६५ जनालाई बिधुत मिटर वितरण ।
२९ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०६:४१
महोत्तरीपोस्ट गौशाला समाचारदाता।महाेत्तरीकाे गाैशालामा नेपाल बिधुत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुर तथा वितरण केन्द्र गाैशालाद्वारा ६५ जनालाई नि:शुल्क बिधुत मिटर वितरण गरेको छ । मंगलबार बिहान ११ बजे गाैशाला नगरपालिका ११ बिरेन्द्र बजार स्थित वडा नं. ११ काे कार्यालयकाे प्रांगणमा एक समारोहबीच नि:शुल्क मिटर वितरण गरेको हाे । अति विपन्न तथा सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाहरुकाे लागि नि:शुल्क बिधुत मिटर वितरण गरेको वितरण केन्द्र गाैशालाकाे प्रमुख: ईन्जिनियर राेसन कुमार सिंहले बताएका छन् ।
तत्कालका लागि गाैशाला नगरपालिका वडा नं. १० मा ६५ जनालाई वितरण गरेको र केही दिनमा अति विपन्न तथा सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाहरुकाे लागि क्रमिक रुपमा क्षेत्रभरिमा नि:शुल्क बिधुत वितरण गरिने सिंहले जनाएका छन् ।
उक्त कार्यक्रमकाे बिच नेपाल बिधुत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरका प्रमुख: अाेम प्रकाश महताे नेपालमा क्रमिक रुपमा बिधुत चुहावट खटदै अाईरहेकाे बताउनुभयो । अब केही दिनमा अजय सुधार हुने महताेले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नगरपालिकाका उप-मेयर: अाशा लामा, वडा अध्यक्ष: शेख जलिल, बद्री नारायण श्रेष्ठ, नेता बिष्णु लामा, बिधार्थी नेता: सुर्य नारायण साह, लगाएतका वक्ताहरूले सम्बाेधन गरेका थिए ।